Koorso bilaash ah oo bilaash ah oo ah AutoCAD 2013 - Geofumadas
Kursi fiican oo AutoCAD 2013 ah oo bilaash ah
Mee, 2011 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS
Yaa doonaynin koorso bilaash ah oo online ah oo ah AutoCAD ...
Waqtiga gaaban ma jiro sida koorso rasmi ah oo lala yeesho macallin wanaagsan si uu u barto AutoCAD. Laakiin ikhtiyaarka aan doonayo inaan muujiyo ayaa iga tagay waxoogaa yaab leh, iyada oo la tixgelinayo in AutoCAD 2012 aysan soo gaarin waqti hore. Tani waa koorsada AutoCAD 2012 oo kor u qaadaysa qoraaga Guias Inmediatas.com, oo lahaa rabitaan si loo hagaajiyo koorsada jirey iyo weli waa for AutoCAD 2008 laakiin hadda hoosta cusub iyo ugu dambeyntii Maxaa Cusub ee AutoCAD 2012.
Faa'iidada ugu weyn ee koorsadani waxay tahay in lagu duubo muuqaal la yiraahdo codka u sharaxaya talaabo talaabo ah, iyada oo qaar ka mid ah caawimaad dheeraad ah ee dib-u-soo-saarka oo ku siinaya farxad iyo nimco shakhsi ahaaneed. Barashada habkan waa wax aad u macquul ah, gaar ahaan kuwa isticmaala kuwaas oo horay u yaqaan AutoCAD, laakiin kuwa aad u lumay jilbaha muuqaal muuqaal ah, gaar ahaan sababtoo ah kani waa isticmaale aan u qaadan kooras laakiin wuxuu bartaa qaab isku mid ah. Sidoo kale koorasku wuxuu u muuqdaa mid aad u fiican dadka cusub, sababtoo ah jadwalka waxaa loo jeedaa shaqo wax ku ool ah; inkasta oo aysan ku dhicin jimicsi dhammaadka si loo horumariyo shaqo dhamaystiran, sida magaaleynta ama qorshaha guryaha, u dirto amar kasta oo cutubka ay tahay.
Fiiri sida ficilku yahay ficil ahaanshaha Ribbon, ka dib markii qof uu u sharaxo rajo ka sii badan shilkeena dhowr sano ka hor.
Waa in la aqoonsado in dadka oo dhan aysan diyaar u ahayn inay u tuuraan maaddo sidan oo kale ah; Internetku wuxuu u ogolyahay aqoon badan in la barbardhigo maalin kasta oo dheeraad ah, sidaa darteed marmarsiiyo yar oo lagu barto barnaamijka. Ku qanacsanaanta ayaa loo kordhiyay Luis Manuel González Nava, oo ah qoraaga badeecadan. Waxaan ku tusi doonaa tusaaleyaal, oo ka hooseeya mawduucyada kooban ee horay loo heli karo, oo ay ku jiraan fiidiyowyada 400 oo horayba loo heli karo iibsashada, oo ay ku jiraan xirmo ah Blocks for AutoCAD iyo ilo kale oo dheeraad ah.
Qaybta Koowaad: Fikradaha asaasiga ah ee AutoCAD
Cutubka 1: Maxay tahay AutoCAD?
Cutubka 2: Xiriirka screen AutoCAD 2012
Cutubka 4: Qodobbada Sawirrada Qaabbilaadda ah
Cutubka 5: Joometiriga Waxyaabaha Aasaasiga ah
Cutubka 6: Walxaha isku dhafan
Cutubka 7: Object Properties
8 Cutubka: Qoraalka
Cutubka 9: Tixraacyada Noocyada
Cutubka 10: Raadinta Xogta Tixraaca
Cutubka 12: Xannibaadda Parameter
Cutubka 13: Navigate 2D
Cutubka 14: Maareynta Muuqaalka
Cutubka 15: Nidaamka Isku-xirka Shakhsiyeed
Qaybta afaraad, Dhismaha fudud ee walxaha
Cutubka 17: Waad daabacan
Cutubka 18: Editing Advanced
Cutubka 19: Qalabka
Cutubka 20: Shillin, Dareemayaal, iyo Xuduudaha
Cutubka 21: Qalabka Palette
Qeybta shanaad, Ururka sawirada
Cutubka 22: Daboolka
Cutubka 25: Khayraadka ee Sawirada
Cutubka 26: Su'aalo
Qaybta lixaad, Xajinta
Cutubka 27 Dimensioning
Qeybta 28 CAD Qiyaasaha
Qeybta toddobaad, qaabeynta iyo daabacaadda
Cutubka 29 Daabacaadda Qorshaha
Cutubka 30 Habeynta Baska
Cutubka 32 Qorshayaasha qorshaynta
Qaybta sideedaad, sawir-saddex-muuqaal
Cutubka 33 Xeeladda 3D
Cutubka 35 View in 3D
Cutubka 36 Walxaha 3D
Cutubka 38 Rugaha
Cutubka 39 Mesh
Cutubka 40 Qodobbada
Kooraska waxaa lagu qaadayaa online, bilaash ah.
Ka bilow koorsada internetka ee AutoCAD 2012 halkan
Sidoo kale koorsada waxaad iibsan kartaa US $ 34.99 si aad u aragto iyada oo aan lahayn xiriirka internetka
Koorso buuxa oo ah AutoCAD 2D iyo 3D Videos 477
Browser fudud oo loogu talagalay Mawduucyada Browsing
Dhammaan faylasha sawirkaDabcan
Sawirada 17,000 dwg de blocks iyo moodooyinka 3D
255 bogagga buugagga dijitalka leh cutubyada 40
Qiimaha maraakiibta kuugu jirta gurigaaga, waddan kasta oo ku yaal Ameerika iyo Yurub.
Waxaa laga iibsan karaa PayPal, Kaarka Deynta iyo Bangiga.
Kadibna kujada sicir-dhimista si ku meelgaar ah u bixiso Z! Kuuboonada, koorsada waxaa la bixiyaa adeegga FastSpring, si loo hubiyo inaad ka bixin karto habab kala duwan oo ay dadku codsadeen iyo lacagaha u dhigma.
Habka ugu horeeya waa adigoo isticmaalaya credit ama credit card.
Midda labaad waa iyada oo loo marayo xisaabta PayPal
Saddexaad waa iyada oo loo marayo bangiga ACH, oo loogu talagalay kuwa leh laanta online-ka. Lama adeegsan karo dhammaan waddamada.
Midka ugu dambeeyana waa wareejinta caalamiga ah. Tan darteed waa inaad doorataa «Amarka Iibsashada», si aad boostada ugu hesho xogta bangiga xiriiriyaha ee bangiga aad dooratay ee magaaladaada.
Haddii aad haysato kuuboon qiime jaban, ama kor u kaca boggaTaageerayaasha Facebook, waad geli kartaa.
Shixnadu waa waraaq cad, oo ka qaadata 3 illaa toddobaadka XNUM, iyadoo ku xiran masaafada; shixnadda ayaa ka baxaysa Mexico, sababtuna waa sababta gudaha dalkan ay u qaadan karto dhib yar hal wiig. Waxaan ku siinnaa kood si loola socdo internetka.
Gaadiidka waxaa la sameeyaa laba maalmood oo ganacsi ah ka dib marka la bixiyo lacagtaas, tanna waxaa sameeya Xayeysiisyada La daabacay ee Mexico.
Markaad gurigaaga timaado, waxaad la tashan kartaa koorsada internetka.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, fadlan nagala soo xiriir.
Haddii aad rabto inaad ka warqabto dallacaadyada gaarka ah, na soo raac Facebook o Twitter
Post Previous«Previous Soo qaado sawirrada iyo qaabka 3D ee Google Earth
Post Next Geofumadas | Visitors: | Magaalooyinka 100 ee wadamada 10Next »
156 Jawaab ah "Koorso bilaash ah oo bilaash ah" AutoCAD 2013 "
Davron isagu wuxuu leeyahay:
Janaayo, 2019 at
gala alekum autocad dasturini o'rganmoqchidim. + 998946171616 telifoon
ku guuleysto manuel gutierrez sanchez isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2015 at
Waxaan baranayaa sanadka ugu horeeya ee dugsiga sare waxaan doonayaa inaan barto autocad.
jose zambrano isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan u sheegay in aan dhowaan fariistay sidii injineer, waxaan ku noolahay Guayaquil, Ecuador, waxaanan jeclaan lahaa in aan qaato koorsada BASIC AUTOCAP
Salaan iyo mahadsanid aad ugu mahadcelisid jawaabtaada
Halkan fiiri isagu wuxuu leeyahay:
Waa hagaag, waxaan kaliya rabay inaan ka tago faallo kooban oo ku saabsan
si aad u aragto haddii ay jiraan dad akhriya.
Ugu yaraan waa waxa aan arkay. Waxaan rajeynayaa inaad qoraal ahaan u qoraysid
Waxaad samaysay ilaa hadda iyo in haddii aan wax ka qaban karno mustaqbalka, waxaad iigu xaqiijineysaa.
Tani run ahaantii waan jeclaan lahaa.
Luis Julios isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2014 at
Hello waxaan kuugu mahadnaqayaa ka qaybgalka koorso sida autocad, kaas oo ii oggolaanaya inaan si shakhsiyan ah u horumariyo
Gonzalo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa inaan qaato koorsada autocad maxaa yeelay waa arrin aad muhiim u ah horumarinta shaqadayda
Janaayo, 2014 at
Luis Alberto Riaño isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa in aan qaato koorsada baska ee fool-maroodiga ah ee aad u mahadcelisid sida aad i caawin karto iyo marka fasaladu u mahadceliyaan
Nelson isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo! Waxaan jeclaan lahaa inaan barto Autocad kooraskiisa. Sababta oo aanad garanayn sida loo isticmaalo waxay iga hortageysaa in aan dalbado boos shaqo fiican. Waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheegi lahaa sida loo helo. Waad ku mahadsan tahay
Rodrigo isagu wuxuu leeyahay:
Diseembar, 2013 at
Hello Waxaan xiiseynayaa in aan qaato koorsada autocad haddii tani run ahaantii bilaash tahay, quseeyso
jorge espinosa ramirez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in badan oo aan ku qaato koorsadan waxaan rabaa in aan barto injineerada mihnadeed waxaanan ogahay in tani ay tahay qalab aasaasi ah
JAVIER GONZALEZ RIOS isagu wuxuu leeyahay:
KULANKA WAXBARASHADA MAGAALADA-AUTHOR-2012 MEESI WAAYE.
Mucaaradka Murin Martinez isagu wuxuu leeyahay:
Mudo intee le'eg ayaa la sugayaa?
Ma aqaan wax kusaabsan autocad waxaanay dalbanayaan in laanta injineernimada ay iigu soo diri karto cursada bilaashka ah ee bilawga ah.
luis bruis isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan barto koorsada autocad marka la xoqdo
Carlos Caraballo isagu wuxuu leeyahay:
Aniga waxaan leeyahay autocad 2011, waxaad leedahay koorsadan barashada.
Waxaan ku jiraa Colombia, waa qiimaha koorsada.
Waxaad iigu soo diri kartaa emailkaaga si aad ula xiriirto.
Enrique isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan helo koorsada bilaashka ah ee autocad si aad uga barato 0 !!
malaggii isagu wuxuu leeyahay:
Maxay u tiraahdaa lacag la'aan?
Mahadsanid, waxaan ka soo jeedaa Panama waxaanan jeclaan lahaa in aan iibsado koorsada
Ricardo Chavez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka helo koorsada bilaashka ah ee heerka eber (bilawga)
jose ramon rodriguea hdez. isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku noolahay magaalada Zitacuaro Michoacan, mudo intee le'eg ayay qaadataa si ay halkaas u hesho. iyo bangiga lacagtaas la bixin karo. salaan
Alejandro Fernandez Villalobos isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inay fiican tahay in koorsooyinka muhiimka ah ay yihiin kuwo dimuquraadiyad ah oo ay heli karaan arday badan iyo dadka doonaya inay wax bartaan.
Fariin noogu soo dir, annaguna waannu kuu iman doonnaa sababtoo ah waxaa laga yaabaa inaanan dalkaaga joogin oo wicitaankuna waa mid adag.
FELIX ALFREDO HERNANDEZ RIVERA isagu wuxuu leeyahay:
WAX KA BADAN YAHAY!
KA HELI KARTAA LAMBARKAAGA KA HORAYSAA?
WAXAAN KA HESHIIYAY MIDKIMADA!
Perü waxay qaadataa 3 todobaadkii iyo badh.
Haddii aad iibsanayso nooca 2013 waxa lagaa qaadayaa 29.99 oo keliya isla maalintaas.
garaacis isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado koorsada aan ka imid Peru ee magaalada Iquitos ilaa inta ay qaadanayso inaan gaaro
arq boqorrada isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2012 at
Waxaan soo jeedinayaa talo fiican, waxaan ka socdaa nicaragua waxaanan jeclaan lahaa in aan koorsada helo.
Waxaan jeclaan lahaa inaan bixiyo wax ku biirin
http://www.cursolatinonica.vacau.com On this page waxaa jira koorsooyin dhamaystiran ee autocad, archicad, iwm. kuwa bilowga ah iyo heerka sare. booqo waxa aad jeceshahay
labaad isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantahay inaad bixiso kooraskan, iyo haddii aan doonayo inaan sameeyo inta ugu badan,
ernesto isagu wuxuu leeyahay:
Waxay yihiin carruur ka mid ah chinada a jeega ha soo download lacag la'aan
Seddex wiig oo Colombia ah
Mudo intee le'eg ayey qaadaneysaa si aad u hesho Colombia? Waad mahadsantihiin.
Dabcan looma darin, Qiimaha AutoCAD ee nooca LT ka badan doolar 1,000. Looma fileynin in lagu soo daro koorso kharashka ku baxa 34.99
Si kastaba ha noqotee, ujeedada barashada, waxaad ka soo dejisan kartaa qaybta oo dhan
Wuxuu u shaqeeyaa sida caadiga ah, waxa kaliya oo uu leeyahay watermark wakhtiga daabacaadda oo sheegaya in uu yahay qaab waxbarasho.
Waxaan ka helaa xiiso laakiin shaki iigama jiro barnaamijka autocad ee lagu daray ama waa inaan iibsadaa
Koorsadan waxaa soo iibsaday dhowr qof oo ka yimid Spain, waqtiga imaanshaha waxaa jira qiyaastii 4 todobaad, tan iyo markii ay ka baxday Mexico.
Illaa iyo hadda, koorso marnaba lumay mana cabsanayno wax cabasho ah.
Gustavo hugo mendizabal vargas isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa in aan iibsado koorsada laakiin sida ay nabdoon u tahay shixnadda marka iibsiga la sameeyo kiiskayga waxaan ahay Spain waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado waqtiga ay qaadaneyso si gurigeyga ugu mahadcelineyso
Kooraska waxaa loo sameeyaa si ay u bilaabaan xoqan, sidaas darteed ha ka baqin.
NAYLEXI isagu wuxuu leeyahay:
Sidee ku saabsan! Aad ayaan u xiiseynayaa koorsada, laakiin sida kediska kor ku xusan, waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado inta uu ii adeegi karo sida bilowga ah?
Elver tineo strap isagu wuxuu leeyahay:
Koorsooyinkaani runti waa waxaad raadineysay, fadlan ma ii soo diri kartaa koontada lacag bixinta
Hugo Davila isagu wuxuu leeyahay:
Ku kalsoonaanta koorsada waxaa ku jira talo ama umeerin loogu talagalay kiisaska ugu caansan, kuwaas oo labaduba ku talinayaan qof 100% bilowga.
Haa, sida maqaalku leeyahay, maraakiibta boostada ayaa lagu daray.
Waxaad ku bixineysaa kaarka deynta ama bangiga.
Manuel isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa in aan iibsado qulqulka oo ah bixinta lacagta 35 ee koorsada, dhammaantood waxaa ku jira
Raul alejandro lombana isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan koorsada autocad, qiimaha iyo maraakiibta, waa mid xiiso leh
Julio Cesar Romero Gallardo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ka helaa shaqo aad u muhiim ah dhammaan shaqooyinka halkan lagu soo bandhigo maxaa yeelay waa wax aad u faa'iido leh
Waxaan horeyba kuugu soo diray email adiga oo xog leh
Hi Ignacio, waxaan u diray macluumaadka emailkaaga.
iskaashato isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa macluumaad dheeri ah maadaama aan aad u xiiseynayo helida salaanta koorsada iyo mahadinta
Hello waxaan xiiseynayaa koorsadan waxaanan u baahanahay inaad u dirto macluumaadka. email iimaankayga fadlan waxaan u baahanahay inaan ogaado sida loo kalsoon yahay.
Koorsada waxaa lagu diraa boostada boostada. Waxay ku kacaysaa lacag dhan 34.99 dollars.
Aad ayaad u mahadsantahay. Fadlan miyaad sidoo kale iigu diri kartaa koorsada bilaashka ah ee emailkayga?
Waxay caadiyan qaadataa inta u dhaxaysa toddobaadyada 3 iyo 4. Waa inaan imaadaa toddobaadkan.
Alexandra isagu wuxuu leeyahay:
Hello Hello Waxaan soo iibsaday koorsooyinka 2 horaantana waxan horey u soo joogin waan ku jiraa dalka Mareykanka waxaana doonayay in aan ogaado taariikhda uu imaan doono.
Dagaalka melissa isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclahay kiero si aan u barto
Waxaan jeclaan lahaa inaan barto Autocad 2012 lacag la'aan fadlan waxaan rajeynayaa inaad iigu soo dirto tilmaamaha emaylkayga.
Nelson Hernandez isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan xiiseynayaa inaan barto koorsada AUTOCAD 2012 lacag la'aan, fadlan u soo dir boostada wixii aan sameeyo si aan u sameeyo.
Waxaan ku noolahay Cali Colombia, waan ku mahadsanahay.
Haddii aad joogtid Mexico City, gadashada ayaa imaaneysa todobaad ka yar.
Haddii aad dhacdo in aad soo qaadato, waxaan dhimi karnaa 5 dollars, taas oo ah, waxaad bixinaysaa isku mid ah 29.99 US dollars.
Waa inaad u dirtaa email editor@geofumadas.com inay ku siiyaan qaan-celinta dhimista iyo cinwaanka meesha aad ka bixi lahayd.
LILIANA isagu wuxuu leeyahay:
Hello, mar kale iyaga oo dhibaya, ma heli karo boostada ma garanayo haddii aan ka tagay email khalad ah lilivar2@hotmail.com. waxaanan jeclaan lahaa in aan ka ogaado CD of Mexico haddii ay suurtagal tahay in si toos ah u tagaan si ay ula wadaagaan cinwaanka.
Lady isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan jeclaan lahaa inaan sameeyo koorsada autocad lacag la'aan, fadlan i soo dir macluumaadka si aad u samayso.
Koorsada cinwaankaaga jir ahaaneed ayaa iman doonta wax ka yar todobaad, sababtoo ah waxay ka baxaysaa Mexico.
Macluumaadka koorsadu waxay ku jirtaa maqaalka, ma jiraan waxyaabo badan oo laguugu sharxayo boostada.
jose gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
Salaan, galab wanaagsan, xiisi kama qabo inaan qaato kooraska 'autocad'. Waxaad u diri kartaa macluumaadka e-maylkayga Waxaan ku noolahay Saltillo, Coahuila, Mexico.
Haa, in farsamada farsamada waxaa jira wax badan oo la aqbalo oo ah AutoCAD.
Koorsadu waxay leedahay qiime isku mid ah, iyadoon loo eegin meesha ay u socoto illaa iyo inta ay gaarsiisan tahay. Waa US $ 34.99 oo aad ku bixin karto bangiga maxalliga ah adoo xawilaad bangi.
javier abril isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay makaanikada warshadaha waana wax badan ayaan u baahanahay si aan u barto si aan ugu soo jiido cad cad. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aan haysto fursad wanaagsan oo aan ku codsan karo farsamada. iyo haddii aad iigu soo diri karto macluumaadka koorsada ee Isbanishka iyo kharashka tan. Waxaan ka socdaa gudaha Ecuador. Waad ku mahadsan tahay wax badan oo aan sugayo jawaabtaada
Qiimaha waa $ 34.95.
Waxay ku jirtay dhiirigelin mudo ah, laakiin kaliya lacag bixinta PayPal, oo ay ku jiraan maraakiibta.
LuVi isagu wuxuu leeyahay:
Laakiin qiimaha waa $ 25 = 68.00. iyo in doorasho in 98.00 loo dhigo .. ???
Waxaad sidoo kale ku wareejin kartaa bangiga.
Iskuxirka "Iibso hadda"
Isticmaal ikhtiyaarka "Iibsashada iibsashada", iyo markii aad ku darto xogtaada, faahfaahinta bangiga aad u baahan tahay waxaa laguugu soo diri doonaa xawaalad bangi.
Lacag-bixinta waxaa kaliya oo lagu sameeyey Pay-Pal? Ma aqaan sida loo bixiyo lacagta sidan .. = (
Waxaan doonayaa inaan ka iibsado koorsada. lambarka xisaabta qaar ka mid ah bangi kasta ..
Gaadiidku waa Peru.
Dooro ikhtiyaarka wax iibsiga. Ka dib marka aad geliso macluumaadkaaga, macluumaadka bangiga xiriiriyaha ayaa boostada loogu soo diri doonaa. Markaa taas waxaad aadeysaa bangiga oo waad sameyn kartaa wareejinta. Qiimaha waxaa ka mid ah dirista cinwaankaaga, boostada.
ALEJANDRO MORENO HUAMAN isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ku noolahay gobolka Peru Ancash waxaan rabaa in aan kooraska u iibsado sidaan sameeyo
Waxaan mar hore u soo dirnay xogta emailkaaga.
Koorsadu waxay ku kacdaa lacag dhan 34.99 US dollars. Waxay kujirtaa qiimaha dhoofinta.
Ma ku jiraan buug daabacan, laakiin DVDka waxaa ka mid ah fiidiyowyada, buug-tilmaameed faahfaahsan.
TITO MEDINA isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN KA HELI KARAA MAALINTA JADWALKA VENEZUELA NESCESARIO WAA MAXAY TAHAY JADEEDKA KA DHAMAYSTA JOOJINTA HADDII AAD HESHIISKU HEYSTA (BUUGA IYO DVD)
Aad ayaan u xiiseynayaa iibsashada koorsada; waxaad iigu soo diri kartaa macluumaadka lagama maarmaanka ah si aad amarka u dhigto, waxaan ka soo qoraa Morelia, Mich
Taasi waa wax fiican Sidaad arki karto, gudaha Mexico koorsada waxay imaaneysaa wax ka yar maalmaha 8.
Macario Calvario Molina isagu wuxuu leeyahay:
Koorso fiican, waxaan kugula talinayaa in loo diro haddii aan ku helo xaalad fiican
Julio Alberto Traficante Gutierez isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan doonayaa in aan barto AutoCAD, waxaan ku noolahay Venezuela iyo 100 Kms.waxaanan jeclaan lahaa in aan ogaado waxa ugu wanaagsan aniga, haddii aan iibsado koorsada ama safar toddobaad kasta.
Ma iibino barnaamijka AutoCAD, laakiin waad soo dejisan kartaa http://students.autodesk.com
Waxa aan iibineyno waa koorso lagu barto sida loo isticmaalo, qiimuhu waa $ US $ 34.99, waxaa ku jira dhoofinta cinwaankaaga. Waa inaad ku bixisaa lacagta iyadoo loo marayo PayPal ama kaarka deynta ee la xiriira PayPal.
Waxa kale oo lagu samayn karaa bangiga, adeegga FastSpring
roque alfonso castro arias isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa qiimaha autocad 2012, lacag bixinta ee Colombia, halkaas oo record maraakiibta oo ay bartaan sida loo maareeyo si ay qorshe u gaar ah, anigu waxaan ahay muhandas
Koorsada waxaa laga qaadayaa internetka, wakhtigaaga iyo raacitaanka fiidiyeyaasha.
Aqoonsiga laguma kordhin.
Hadaad DVD ka codsatid boostada, leylisyada koorsada, burooyinka AutoCAD iyo dhamaan fiidiyowyada aad ku daawatid khadka tooska ah ayaa sidoo kale laguu soo diray. Qiimaha waa astaan, haddii aad tixgeliso in qiimaha ay kujirto dhoofinta gurigaaga ... meel kastoo aad joogtid.
Kiisaska midkoodna lama aqoonsan karo.
Marcela isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan ka socdaa Argentina, waxaan jeclaan lahaa in aan helo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan koorsada, oo ku saabsan bixinta iyo canshuuraha isku mid ah, nooca shahaadada ah ee la soo dhaafay? Waxaan xiiseynayaa inaan sameeyo, sidaas ayaan sugi doonaa jawaabtaada.
Max isagu wuxuu leeyahay:
Aniga, waxaan jeclaan lahaa inaan barto koorsada AutoCAD
Waxay u sheegi karaan faahfaahinta aad u mahadcelineyso.
Mercedes Giuffrida isagu wuxuu leeyahay:
Hel salamkayga. Waxaan ahay naqshad, bilawga Autocad, waxaanan xiiseynayaa koorsada autocad ee 2012. Fadlan u soo dir cinwaanka iimeyga si aad u qaadato koorsada bilaashka ah, Mahadsanid!
Waxaan ka socdaa Santiago del Estero, Argentina, waxaanan u baahanahay koorsada AutoCAD Civil 3D 2012 ee Isbanishka. Waad ku mahadsan tahay
Ing.Civil Alfredo N isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan wax badan ka barto CAD-da "Auto CAD"
Sideen u heli karaa buugaag baabuur online? isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa inaan barto cad cad
Sibila Gonzalez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan barto autocad, sababtoo ah waxaan ahay naqshad waxaanan doonayaa inaan soo qaato qorsheyaalkayga.
Waxaad bixisaa lacagta 34.99 waxaanan u diraynaa cinwaanka aad na siiso markaad lacagta bixineyso.
Dabcan, waxaa laga soo diray Mexico. Marka waxaan u direynaa Kanada isla qiime kan.
Edwin Ortiz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa koorsada waxaana doonayaa inaan iibsado waxaan ahay Bolivian, sida aan sameeyo si aan u helo
Leonardo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku noolahay Toronto Canada waanan rabaa inaan ogaado haddii ay i soo diri karaan kooraskan ama haddii ay hore u haystaan ​​Autocad 2013 maxaa yeelay waa barnaamijka aan ku rakibay!
VICTOR GLZ isagu wuxuu leeyahay:
KOORSADA iga qaado daneeynaya FADLAN LA XIDHIIDH TALEEFANNADA WAXA ****** A / ******* la Ms. NATALY AMA MACLUUMAAD MAIL mahad iyo Salaan u soo diri
Tani waa koorso kaliya.
james perdomo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa in aan ogaado haddii tani ay leedahay shatiga gawaarida 'soflware' dib u celinta suunka dhismaha 2012
Waxaan rabaa in aan barto macalinka aan ka soo jeedo Banfield waxaan tagaa dugsiga 18: 30 ilaa 23 Waxaan horey u mahadcelin karaa.
Leonardo herdenez isagu wuxuu leeyahay:
Waxa uu doonayaa inuu sameeyo koorsada madaniga ah, waxaan u baahanahay inaan ogaado qiimaha iyo meesha ay ka dhiganayaan
Luis alfonso chacon contrera isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan qoro
Waxay ku kacaysaa $ 34.99, waxaa ku jira maraakiibta.
Nidaamka lacag bixinta waa PayPal ama kaarka deynka la xiriira PayPal iyo sidoo kale wareejinta bangiga.
Fabian posada isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa koorsada autocad ee Colombia taas oo u qalantaa sawirka, iyo sida aan u sameeyo macaamilka
jenry espinoza loyola isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa barashada barnaamijkan autocad
Waxaan aqbalnaa kaararka deynta, PayPal iyo waliba bangiga.
Qiimaha waa 34.99 Dollar ama mid u dhigma lacagta dalka.
Colmkenz isagu wuxuu leeyahay:
Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u helo koorsada halkan Venezuela, oo ku bixinaysa Bolivar? Sidee bay ganacsiga ganacsiga, iyada oo loo marayo bankiga?
Waxaan aad u jeclaan lahaa salaantaada gargaarka ......
malaa'ig iskutallaabta isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan xiiseynayaa Dabcan autocad aad, ii qaaska ah waxaa derbiyada barbaro in ay daabacaadda in ay si dhab ah contruirlas, gaar ahaan nesecito ogaan qalab ee AutoCAD inaan ka dhaansado iyo in la dhiso maraan oo kaliya.
Aad baad ugu mahadsan tahay caawimadaada.
lambarka miga guduudan isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ahay hiwaayad dhisme, waxaan rabaa in aan barto autocad 2012 ugu dambeyntii.
Haa, waxaa laguu diri karaa Talyaaniga qiimahaas.
wax dhib ah maleh haddii aad leedahay version in AutoCAD, amarrada waa isku mid, iyadoo farqiga u ah in koorsada kuma jiraan joogtada naqshadaha waxa version.
Miguel Angel Cardozo isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ku noolahay Talyaaniga, waad u diri kartaa halkaan, sidoo kale waxaan haystaa Autocad Architectura 2009, maxaan samayn karaa?
PABLO ALARCÓN MARTÍNEZ isagu wuxuu leeyahay:
HALKEE AYAAN KU HELI KARAA WAXAYAASHA SHARCIYEED?
Jarmal isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay koorso autocad ah 2012 markaad gurigaaga timaado
Markaad hesho xiriirka lacag bixinta, waxaad dooran kartaa lacagta dalkaaga isla markaana u dhiganta.
Luis eduardo plata huertas isagu wuxuu leeyahay:
hi Manuel Waan jeclaan lahaa in aan ogaado qiimaha koorsada qiimaha ay ku leeyihiin qiimaha Colombia horaantii
Qodobka qiimaha koorsada waxaa lagu sharaxay markaad u dirto qaab muuqaal ahaaneed.
Hello, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha koorsada
Koodhka aan ku siinnay, waxaad gashaa aaggaga raadraaca ee Mexico Post, oo waxay kuu sheegi doontaa shuruudaha xaashida.
Tani waa isku xidhka
Carlos Herraez isagu wuxuu leeyahay:
Salaan Waxaan aad wax uga qaban waayo 13 / 3 / 2012 ee la soo dhaafay, waxaan amray in koorsada autocad 2012, Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado sida si ay ula socdaan amarka online via, sida in aan la gali password aan helay.
aad baad u mahadsantahay, Carlos Herraez
Haddii aad ku nooshahay dalka Mexico, waxaad dhigan kartaa Bancomer, waa u dhigmaa 319 pesos.
Marka deynta la sameeyo waa inaad noo soo dirtaa nuqul nuqul ah ama sawir suurogal ah oo ah deebaajiga waxaanu kuu soo diri doonaa.
Dhammaan waxyaabaha ku jira koorsada waxay ku jiraan hal DVD
afternoon've wanaagsan la daawado qaar ka mid ah capiulos autocad online iyo waxaan jeclaa badan, iyo Waxaan u hambalyeynayaa hiso dabcan in kuwa doonaya in ay bartaan iyo annaga na soo cusboonaysiiso barnaamijka in.
Waxaan ahay saaxiib saaxiib dhow ee barnaamijkan waxaan aad u murugaysanahay in aan ka fekerayo in aan helo.
oo waxaan haystaa dhawr su'aalood oo kaliya:
adeegga maraakiibtu waxay yimaadaan ilaa cd. juarez chihuahua ??
iyo intee le'eg ayaa u dhiganta qiimaha koorsada ee kudhaca makaanka Mexico?
iyo intee le'eg DVD ayaa kooraska ku jira?
taas oo dhan horey u noqon lahaa kahor intaad ku mahadsan tahay koorsada iyo hambalyo.
Haa, waxaad ku bixin kartaa bangiga.
Vincent isagu wuxuu leeyahay:
Fadlan, waxaan xiiseynayaa koorsada 2012 AutoCad, waxaan rabaa in aan ogaado haddii koorsada la siin karo bedelka.
Walaal aad u fiican mahadnaq, waxaan kugu mahadnaqayaa.
Cesar isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan ogaado koorsada aasaasiga ah ee autocad, si aan wax u barto oo aan u horumarino howlahayada shaqo.
Koorsada AutoCAD waa bilaash, waa inaad ku aragtaa bogga aan ku xirno. Si aad u hesho nooca cusub ee AutoCAD 2012 lacag la’aan waxaad kala soo bixi kartaa http://students.autodesk.com
Jose Amado Aguilera Quispe isagu wuxuu leeyahay:
Sida aan u sameeyo isdiiwaangalinta koorsada waxaan u baahanahay inaan barto version cusub
Waxay aad u mahadcelinayaan.
Koorsada Free AutoCAD 2012 waa halkan:
Waxaad ku arki kartaa oo kaliya internetka, xiriir kasta wuxuu leeyahay fiidiyoo leh maqal, cutub kasta.
Gio Din isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u heli karaa koorsada ama tababarka Autocad 2012 bilaash ah? inkastoo ay tahay midda aasaasiga ah.
Luis isagu wuxuu leeyahay:
sida muuqata ma dhajin kartid hambalyo
Hambalyo Manuel Medina Waxaan xiiseynayaa koorsada autocad 2011 laakiin ma arko boostadaada, halkan waxaan u soo diraa
Naviskork waa barnaamij kale oo ka mid ah AutoDesk, ha ku mashquulin in loo dhoofiyo qaab kale, maxaa yeelay barnaamijku wuxuu akhriyaa faylasha dwg
juank isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ogaado sida loo arko faylka autocad ee barnaamijka navisworks .. sida loo dhoofiyo sidaa daraadeed barnaamijkani wuxuu akhrin karaa ...?
vergara - peru isagu wuxuu leeyahay:
Waad ku mahadsantihiin deeqdan aadka u weyn ee Mr. Nava, waxaa jira dad yar oo aan si shakhsiyan ah u siineynin adeegyo loogu talagalay barashada bilaashka ah ee koorsooyinka sida faa'iido leh sida autocad.
Walter Rúa Cerón isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan barto koorsooyinka bilaashka ah ee ay barteen Us; inay awoodaan inay bartaan waxa ah autocad 2D iyo 3D, oo ku saabsan diyaarinta qorshooyinka (guud ahaan); Si taxadar leh ayaan uga soo tagaa Us. si dhakhso ah u arag
Uma baahnid inaad u mahad celiso Manuel, salaan iyo inaad sii wadato shaqadaada.
marco antonio isagu wuxuu leeyahay:
Waa maxay warka ugu wanaagsan ee koorso bilaash ah, cad cad
Luis Manuel González Nava isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiib qaali ah:
Waxaan qorayaa inaan kuu sheego in koorsada Autocad 2012, laga bilaabo Screen si dhab ah, waa dhammaatay. Maanta waxaan soo daabacay 40 iyo cutubkii ugu dambeeyay bogga. Marka la eego arrintaan waxaan jeclaan lahaa in aan sameeyo qaar ka mid ah faallooyinka:
- Waxaan si gaar ah uga mahad celinayaa mudnaanta koorsada boggaaga. Waxaa aad iigu muhiim ii ah booqashada aan ka helay boggaaga goobtaada.
- Waxaan ogsoonahay in koorsada la hagaajin karo siyaabo badan. Qaybta soo socota waxaan qaadan doonaa fursad aan ku daro tusaalooyin iyo diin mawduucyo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxay joogtay si ay u cusboonaysiiso si dhakhso ah sida ugu dhakhsaha badan ee aan u heli karno barnaamijka 2013 ee barnaamijka oo aan hadda ahayn, waxay igu qaadatay bilooyin 10 si ay u dhamaystirto, 3 ka badan intii la qorsheeyey.
- Maalmaha soo socda waxaan heli doonaa nuqulka diskka ee isla koorsada oo diyaar ah, kuwa ay ku adagtahay in ay arkaan internetka oo waydiiso inaad soo dejiso. Waxay yeelan doontaa qaar ka mid ah qaybo yaryar oo kharashkoodu yahay mid la heli karo, oo lagu daray koorsada bilaashka ah ee la sii wadi doono.
- Sidoo kale maalmo yar ayaa laga heli karaa waxa ku saabsan, aniga ahaan, ugu yaraan, tirada 1 ee koorsooyinka kombiyuutarka bilaash ah ee online ah: http://www.aulaclic.es
Waxaan fursad u helayaa inaan kuugu jeclaado maalmaha soo socda.
german vargas isagu wuxuu leeyahay:
sidee baan u heli karaa koorsada autocad lacag la'aan
sandra rodriguez geed isagu wuxuu leeyahay:
xiiseyneyso koorsada autocad ee 2012 lacag la'aan ah
Koorsada buuxda ee AutoCAD 2012 waxay ku taal bogga lagu calaamadiyay dhamaadka qodobka
Ka fiirinta internetka wax kharash ah ma laha.
MILTON OVIEDO isagu wuxuu leeyahay:
Waan jeclahay, waan xiiseynayaa helitaanka koorsada waxaan jeclaan lahaa inay noqoto lacag la'aan. Aad u fiican
Fiidiyowyada waxaa laga daawadaa khadka tooska ah. Lama yareyn karo.
LININ CACERES isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan hoos ugu dhigi karaa calaamadihii aan ugu mahadcelinay horeyba
waxqabadka wanaagsan ...... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Helitaanka fiidiyowyada waa bilaash, adigoo raacaya xidhiidhka aan ku jirin Hagaha La La'aanta.
antonio virhuez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan ogaado sida aan u diiwaangashanahay, iyo inta uu kooraska u qalmo, iyo waqtiga koorsada, mahadsanid.
Si aad u qaadato koorsada "AutoCAD", waxaad kaliya tagtaa xiriirka
Waxaa jira xiriirka fiidiyowga kasta.
waxtarka wanaagsan .. Waxaan ka socdaa Paraguay iyo salaan
Valeska channels isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan doonayaa inaan sameeyo koorsadan waxaanan jeclaan lahaa inaan helo macluumaad dheeraad ah.
boqorada william isagu wuxuu leeyahay:
hello, fadlan iga caawi, waxaan u baahanahay koorsada bilaashka ah, grasias
Alwaax isagu wuxuu leeyahay:
Barnaamijka Wanaagsan ee loogu talagalay
Barnaamijka Wanaagsan ee hoos imaanaya fasallada
Haddii aad waydiisato koorsada, waa bilaash haddii aad daawato fiidiyowyada internetka.
Haddii aad weydiisato AutoCAD, kani bilaash ma ahan. Waxaa iska leh AutoDesk waana lagama maarmaan in la iibsado, nooca LT ee AutoCAD 2012 ayaa ku kacaya hal kun oo doolarka Mareykanka ah.
PAOLA SALAZAR isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan rabaa inaan ogaado sida aan u bartay barnaamijkan iyo haddii ay tahay WAX BILAASH AH WAXAA LAGA BILAABAYAA ODE AUTOCAD 2011 ISTICMAALKA MACLUUMAADKA AH OO KU SAABSAN FADLAN !!!
Kooraska lama soo dejin karo, waa inaad aragto fiidiyowyada ku xiran internetka.
alf isagu wuxuu leeyahay:
Mahadsanid, waxaan ahay qof cusub oo isticmaalaya AutoCAD, waxaanan rabaa inaan kuugu mahadnaqo deeqda koorsadan iyo waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii aan soo dejisan karo iyo sida, waan u mahadcelinayaa.
Roberts Basaldúa isagu wuxuu leeyahay:
Abaalmarinta AutoCAD 2012 in baararka cusub iyo amarrada cusubi ay bixiyaan qaybta cusub ee AUTODESK Software, tanina waxay khuseysaa Machadyada Madaniga ah oo ay weheliso Dhismaha Madaniga iyo Wadooyinka.
Waxaa jira shirkado internet ah oo u adeega koorsooyinka sidan Microstation, laakiin waa la bixiyaa.
Waxaan ka tagayaa link:
U sheeg inay ku siiyaan koodh sicir-dhimis ah "geofumadas"
Jorge isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jiraan koorsooyin noocan oo kale ah ee Microstation v8i?
koorsada autocad isagu wuxuu leeyahay:
Kaalmo aad u fiican Waxaan u maleynayaa inay runtii fursad u tahay in ay bartaan inay wax ka qabtaan barnaamijkan, lagama maarmaanka u ah xirfado badan. Noocyada kala duwan ee qalabkeeda, sahlanaanta isticmaalka iyo caddaynta isugeyntu waxay ka dhigeysaa barnaamijkan mid ka mid ah kuwa ugu cadcad dhuxusha, dharbaaxayaasha, naqshadeeyayaasha garaafyada, qurxinta, iwm.